Shaqo-abuurka yaa ka masuul ah ? Sidee shaqo loo helaa? Waa maxay sababta dadka shaqada haystaa u tahriibayaan WQ-Aadan Nookiya ADAM NOKIA | Haqabtire News
Shaqo-abuurka yaa ka masuul ah ? Sidee shaqo loo helaa? Waa maxay sababta dadka shaqada haystaa u tahriibayaan WQ-Aadan Nookiya ADAM NOKIA
December 21, 2016 - Written by admin
Shaqo-abuurka yaa ka masuul ah ? Sidee shaqo loo helaa? Waa maxay sababta dadka shaqada haystaa u tahriibayaan ? By ADAM NOKIA
karaamada Rabbi siiyey insaanka ee Qur’aanka lagu sheegay waa caqliga ,waxaa kaloo Rabbi ku sheegay meelo kale oo Qur’aanka ka mid ah in la is weydiin doono Caqliga,araga,maqalka,iyo nimcooyinka kaleba.
Somalidu waxay tidhaahdaa aan wax qalano iyo aan midiyaha qarsano isma qabato,waynu jecel nahay in wax waliba hagaagaan,laakiin wadadeedii mahayno,riyona waxba kuma yimaadaan,Allaah in laga baqo oo dariiqiisii la raaco,la iska ilaaliyo musuqmaaasuq,been,khiyaamo, caajis iyo xasad ayaa loo baahan yahay,intaa ka dib firfircooni iyo tawakal lagu daro.
sida caadiha ah shaqooyinka waxaa loo qaybiyaa laba: kuwo adeeg ah iyo kuwo wax soo saar ah,labaduba waxay u baahan yihiin xog,khibrad iyo aqoon,waxay kaloo u baahan yihiin nidaam dawladeed ama bulsheed oo hufan kaasoo damaanad qaadi kara habsami-usocodka iyo jiritaankooda.
Shaqooyinka qaar waa kuwo gaara kuwona waa dawli,labadaba waxa xil kasaaran yahay inay ilaaliso iyo inay kobciso dawladda ama nidaamka markaa jira.
|Dadku dadaal badan ayey muujiyeen noloshana way la tacaalayaan laakiin waxaa meesha ka maqan doorkii dawladdu lahayd ,xagga ilaalinta iyo gacan qabashada ama tababarka iyo jihayntaba,waana ta keentay in dad badani meel ay ku hagaagaan garan waayeen ,ganacsatadii yar-yaraydna in badani kacdo,qaarkoodna markay arkeen in ay hoos u socdaan wax rajo ah oo ay dugsadaana aanay jirin (uncertainity) ay tahriibeenba, aan is weydiino
Sidee shaqo loo helayaa?
qof waliba waa inuu isku dayo siduu shaqo u heli lahaa ama u samaysan lahaa mid toos ah ama mid dadban,shaqada aan la waayin waxaa ka mida aqoonta mid maskaxda iyo mid gacanta ah,maalin kasta waa in aqooni nacfi leh kuu korodho shaqee ama ha shaqayn,waa hanti ma guurto ah oo aad xoogsatay kaydna kuu ah,shaqooyinka qaar waxay u baahan yihiin macluumaad, iyo cilmi badan si aad uga fogaatid khasaare (risks)
masiibada qaadka waa in iska daayo,tuulada ugu yar habeenkii waxaa ka baxa 200.$ toban sano waa 720,000.$ lacagtani waxay dhisi kartaa tuuladaa 13.warshadood oo kuwa yar yar ah,iska daa dhibtiisa kale.
Dadla labeenta ummada la dhaho waa inay xil iska saaraan sidii ay u badbaadin lahaayeen dadka danyarta ah,maskaxdooda iyo maalkoodana ku maal-geliyaan bulshda xag shaqo iyo xag maamulba.
Dawladda waxaa laga rabaa inay xilkeeda ka soo baxdo,intii awoodeeda ah,waana in aanay carqalad ku noqon qof isagu dadaalay.
DAAWO: “Madaxweyne Muuse Biixi Waxa Aan U Soo Jeedinayaa In Uu Dalka Ka Mamnuuco Idaacada BBC-da Haddii…” Ex Wasiir Cadaani
War Deg-deg Ah: Madaxweyne Biixi Oo Xil Ka Qaadis Iyo Magacaabis Sameeyay
DAAWO: “Cabdiraxmaan Cirro Siyaasad Sabool-nimo Ah Ayuu Ku Dhaqmayaa Siilaanyo Caado Iyo Dhaqan Toona Uma Laha Khiyaamo…” Maxamuud Xaashi
“Waanu Wadayna Mashaariicda Berbera Iyo Boosaaso,” Afhayeenka Shirkadda DP World
Donald Trump Oo Madaxweyne Putin Ku Casuumay Inuu Booqasho Ku Tago Dalka Maraykanka